Kudonhedza Sevhisi, Chigadzirwa Sourcing, Mutengo Wakawanda - Nextschain
Kudonhedza kwakanyanya uye basa rekuzadzisa
Zvese-mu-imwe Kudonhedza mhinduro kubatsira yako kuchengetedza yakawanda nguva uye kuwana Yakakwira purofiti
100% Yakachengeteka uye Yemahara. Hapana Kiredhiti Kadhi Inodikanwa.
NextsChain imwe-yekumira kudonhedza mhinduro yeecommerce. Isu tinopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvekutengesa, odha kuzadzikiswa, mapakeji ekuteedzera anotarisira uye kugadzirisa kurongedza & kushambadzira etc. Haufanire kunetseka nezve hesera, yakareba nguva yekutumira kana yako Aliexpress account kuvharwa.
Isu tinokwanisa kupa nyanzvi yekuzadzikisa sevhisi muChina. Unogona kushandura Aliexpess, Alibaba uye taobao mirairo yekuzadzisa neNextsChain. isu tinokubatsira iwe kubata ako odha uye hesheni kuzadzikiswa, kukupa iwe yakanakisa yekuzadzisa mhinduro.
Gadzirisa Kurongedza & Branding
NextsChain inokubatsira iwe kugadzirisa yako logo yechiratidzo pamabhokisi ekupakata, mabhegi uye matepi. Uye isu tinotsigirawo OEM & ODM kugadzirisa maitiro echiratidzo chako muchiratidzo chako.
Chii chinoita kuti tisiyane
Mamirioni ezvigadzirwa zviri nani
Vatengi vanozove neakasiyana epamusoro evanopa uye vanosarudza kubva kune yakawanda yezvinhu zvinopfuura mazana mashanu ezviuru pamutengo wekutengesa. NextsChian zvakare inopa Zvinokunda zvigadzirwa uye Zvigadzirwa zveTrending kubatsira vatengesi vedu kumhanyisa bhizinesi ravo rekudonha zvinobudirira.
Buck Hora Rutsigiro
NextsChain inopa zvirinani uye zviri nyore kushandisa Buck edit chishandiso kukurega iwe kuti utonge zvigadzirwa zvako Kunyora zvakanaka zvine nguva shoma. Iwe unogona kuve nenguva yakawanda yekuteerera kushambadziro yako uye vamwe bhizinesi rekutengesa.
NextsChain inokutendera kuti uise zana emaodha mumaminetsi, nekukurumidza kupfuura chero zvimwe zvishandiso! Sevha nguva uye uwane kushanda pamwe neAliExpress kudonha mudiwa!
Nokusingaperi Mahara Chirongwa
Isu tinopa zvachose chirongwa chemahara
NextsChain App ine yakanaka inoteerera dhizaini, shanda zvakanaka neako smartphone, Tafura kana PC compuer. iwe unogona kubata rako rekudonha bhizinesi chero nguva uye chero kupi.
Kurumidza & Mahara Kutumira
Zvinotora nezve 5 - 8 mazuva ebhizinesi kusvika kuUS, mazuva matatu kusvika ku8 kuJapan, Korea, Singapore, Malaysia. Uye angangoita 4 - mazuva gumi kusvika Canada, Australia, Mexico, kana iyo EUR nyika.
Kana iwe uri kuita kudonhedza bhizinesi ne oberlo pamberi. hatigone kungokubatsira kupfupisa nguva yekuendesa uye kurongedza tsika nekumaka zvigadzirwa zvako, asi zvakare zvinokubatsira kupinza zvigadzirwa kubva oberlo kuenda kuNextsChain nezvigadzirwa zvinongedzo uchingobaya mashoma pane kuteedzera imwe neimwe.
Package Kuchengeta & Gadzirisa
Needu Akangwara package package system, NextsChain rega iwe ubate pasuru yako zvakanaka, unogona kuwana zviri nyore kuti pasuru yako riini uye pavanouya panguva ipi. Kuti udzivise vatengi vazhinji vanogunun'una uye chengetedza yakawanda nguva.
Auto Inventory & Mutengo Manage
Yechokwadi-nguva ekuverenga manejimendi masevhisi, uye Yekuzviongorora Mutengo kugadzirisa uye ziviso nemutemo. Iyo imwe nzira yakanaka kune AliExpress.
Isu tinobatana neaya ecommerce mapuratifomu uye misika
Tinopa 500,000+ zvigadzirwa zviri nani nemutengo wekutengesa
Regedza kutambisa mari pazvinhu zvakashata, NextsChain inopa yakawanda mibairo yekukunda zvigadzirwa zvekutengesa.
Mucheche & Kid
Shangu & Bhegi
imba & gadheni
Imba & Bindu
Runako & Hutano
Vana & Matoyi
Iyi Anwendung mutambo wekuchinja zvigadzirwa zvikuru nguva dzekutakura uye huru mitengo kamuri kuti uwane purofiti revatengi reps ndiyo yakanakisa yandakamboita nayo ndakamhanyira mune imwe nyaya uye yakagadziriswa mukati meyakafanira nguva imwecheteyo zuva. Great app. Mosts yezvinhu kutumirwa mahara
Vegan Apple Tarisa Mabhendi
Ini ndakasarudza iyi app nekuti ini ndaida kupa vatengi kukurumidza kutumira kuUK (uye pamwe pasirese, pakupedzisira) sezvo 20-40 zuva rekutumira nguva kubva kune vamwe vatengesi yakawandisa. Ini ndine chaiyo niche yechigadzirwa niche, saka ndanga ndichinetsekana kuti sarudzo dzangu dzichava shoma, asi pane zvakawanda. Ndine zvigadzirwa zvinopfuura zana nemakumi matanhatu zvakamirira kupinzwa kunze kwenyika, uye zvese zvinotaridzika kunge zvakanaka. Mazita echigadzirwa akanaka uye akajeka, mitengo inonzwisisika yekudonhedza etc. handisati ndagamuchira odha kuburikidza navo (IR ...
Ndakave neapp iyi kweinenge mwedzi miviri ndisati ndanyora ongororo iyi. Kune dzakawanda wongororo dzakapihwa pazuva rekutanga rekushandisa. Ichi chikuru Anwendung. Ini ndapedza sampuro odha iyo yakatumirwa chaizvo kune nguva sezvakataurwa. Ini ndapinza inosvika zana nemakumi mashanu zvigadzirwa zvine budiriro. Ndakafonera rutsigiro kanokwana kuita mashanu nemhinduro inowirirana nguva dzese. Ndingakurudzira zvikuru iyi purogiramu kune ani zvake. Kutenda zvakanyanya NextsChain! ndiri kuwedzera kuongororo iyi. Ini ndoda kuzivisa munhu wese ruzivo rwangu rwechokwadi neNe ...
OM Mufashoni Boutique
Ndiri kufara kwazvo neNextschain. Zvizhinji zvezvigadzirwa zvekutora kubva uye yakakura zvipfeko sevhisi. Ndakanga ndine nyaya uye vakandibatsira ipapo ipapo ndokundigadzirira ini. Ndatenda zvikuru NextsChain.
Waini uye Kofi anoda
Ndanga ndichishandisa iyi purogiramu kwemwedzi uye ikozvino ndoenda kuApp yechitoro changu. Ini ndawana zvigadzirwa pano zvandisingakwanise kuwana pane mamwe mapurogiramu ekuzadzikisa. Ini handidi kushandisa oberlo uye kushandisa aliexpress nekuti nguva dzekutakura dzinotyisa uye unofanirwa kubata nemiriyoni vatengesi vakasiyana. Nextschain anotarisira zvese. Iwe unowana odha uye unobhadhara iyo yakawanda uye ivo vanorongedza uye vanotumira chigadzirwa uye vanotumira ngarava yekusimbisa email. Kana ukapinda mumatambudziko chero api anodzokera kwauri uye ...
Zvakanaka kana iwe uri kutsvaga kutanga kudonhedza iyi 2020 usatarise kwakatenderedza iwe uri munzvimbo chaipo, Nextchain ine rutsigiro uye zvese zvishandiso kwauri kuti ubudirire kana iwe uine chero dambudziko ivo vatengi vavo masevhisi ingori mashoma mashoma kuti ubatsire iwe uye gadzirisa uye gadzirisa dambudziko rako. Nextchain ndicho chibvumirano.
Zvinoshamisa Great Shipping Service. Kure zvirinani kupfuura ese ekutsvagisa uye kutumira maapplication andakashandisa. Kutenda nemabasa akanaka uye nekuita kudonha kuri nani.
Pooch Shamwari Kupa
Kutanga, ndakasangana nechigadzirwa ichi zvisina kurongeka uye ini ndaisakwanisa kufara zvakanyanya zvandakaita! dai ndaona izvi nekukurumidza, zvingadai zvakandichengetera nguva yakawanda. Yadzo chigadzirwa renji yakanaka, ipa yakasarudzika tepi yekutumira uye mabhokisi ekukubatsira iwe kuvaka yako mhando, nezvimwewo yavo yemahara chirongwa inopa yekutanga-nguva kudonhedza vanotakura chirongwa CHIKURU uko iwe unogona kuwedzera chiuru zvigadzirwa! Iyo yekuendesa nguva kuUS ingangoita mazuva 5-9, ayo akanaka chaizvo achienzaniswa neAliexpress nemamwe makambani. Ndakawana mukana wekushandisa thei ...
Ini ndiri mutsva mukutumira maodha kuchitoro changu. NextsChain yakakwira seyese yekufambisa sevhisi. Sezvo ini ndanga ndisina chokwadi chekuita, ini ndaishandisa Chat bhokisi kutaura nemubatsiri uye ane ruzivo mubatsiri uyo akatsanangura sevhisi kwandiri. Ndakavimbiswa kuti kutumira kwacho kunokurumidza uye nehanya. Nextschain anga atove nerangu chigadzirwa ruzivo rwakagadzirira ini. Ndinoyemura kukoshesa kwavanopa kune zvakadzama, izvo zvinondiponesa nguva. Martinez
Isa NextsChain App
Isa app yeNextsChain kuchitoro chako chekutengesa.
Isa maodha ne1-tinya uye ubhadhare yeNextschain vatengesi.
Isa maodha uye ubhadhare kune Nextschain vatengesi.
Kutumira maodha kune vatengi vako kubva kuNextschain imba yekuchengetera zvakanyanya.